Ny Semalt Expert dia manambara hoe ny fampiasana tranonkala ho an'ny finday dia novolavolaina niaraka tamin'ny Fitsarana iray mitongilana
Na dia mety tsy ara-dalàna aza ny manala ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala raha tsy nahazo alalana mazava ny tompon'ilay vohikala, vao haingana ny mpitsara no nanapaka tamin'ny fomba hafa. HiQ Labs vao haingana no nanao fitoriana momba ny LinkedIn mba hisorohana azy tsy hamoaka angon-drakitra avy amin'ny pejy LinkedIn.
Toa nahatsiravina ho an'ny ankamaroan'ny olona izay notaterin'i LinkedIn fa hanome ny fahafahana miditra malalaka amin'ny tranonkala. HiQ dia nampiasa ny algorithm ampiasainy raha mahita olona iray mitady LinkedIn mitady asa noho ny fanovana nataon'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny pejiny.
Ireo algorithm dia mihazakazaka amin'ny angona azo avy amin'ny pejy Internet LinkedIn. Araka ny efa nampoizina, tsy tian'izy ireo ny LinkedIn ary nisy ny fanoherana natao mba hisorohana ny hiQ amin'ny fitrandrahana fanampiny. Ankoatra ireo sakana ara-teknika napetraka, dia navoaka koa ny fampitandremana ara-dalàna.
Ny fanombohana dia tsy nanana safidy afa-tsy ny hamoaka ilay olana ara-dalàna. hiQ dia mila mitady fananganana ara-dalàna. Ny tetikasan'ny orinasa dia naniry ny hanesorana ny sakana ara-teknika nalefan'i LinkedIn. hiQ dia te-hahalala ny fizotran'ny data amin'ny LinkedIn ihany koa.
Soa ihany fa tamin'ny fanombohana dia nahazo izay tiany izy. Ny didim-pitsarana dia nankasitraka ny hiQ. Ny LinkedIn dia nodidiana mba hanesorana ireo trangan-javatra rehetra manakana ny hiQ tsy hanaparitaka ny tranonkala (LinkedIn) ary koa hanome fefy maimaimpoana satria ny lalàna dia feno. Ny mpitsara dia nanosika ny fanapahan-keviny mikasika ny hoe ny fanirian'ny hiQ dia ny angona izay naseho ho an'ny daholobe.
Ny mpitsara dia tsy hoe nandidy ny voampanga hanala ny rafitra fisorohana rehetra napetraky ny HCQ, fa nandidy ihany koa izy fa tokony hihemotra amin'ny fihetsika toy izany any aoriana.
Ny fampiroboroboana ny angon-drakitra misokatra
Raha toa ka mbola fehezin'ny fe-potoana voafetra ny didim-pitsarana, dia mampientanentana ny maheno fa ny lalàna dia manohana ny angon-drakitra misokatra ho an'ny daholobe sy ny fahazoana miditra malalaka amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto, araka ny fanamafisan'io didy io. Na dia manohana ny voampanga aza ny fanapahan-kevitra farany dia efa napetraka ity zava-misy ity.
Nanohana io politika io ny mpitsara noho ny fanakatonana ny fandresen'i LinkedIn amin'ny ankapobeny. Raha nanandrana nanamarina ny LinkedIn fa nitifitra ny fiainany manokana ilay mpangataka, nanohitra azy ny mpitsara satria ny fivarotana dia mivarotra ny angon-drakitra.
Raha tsy nitazona ny rano ny fanoherana, dia nanambara ihany koa ny voampanga fa ny didin'ny hiQ dia manitsakitsaka ny lalàna momba ny hosoka sy ny fampihorohoroana (CFAA) noho ny fanombohana ny fidirana amin'ny serivisy ho fanangonam-baovao tsy ara-dalàna. Indray, nodinihina ilay hevitra. Nolavina tamin'ny tany fa ny fananganana ny votoatin'ny horonantsary tsotra sy tsy voaaro fotsiny no nahatonga izany.
Ny mpitsara dia nanindrahindra ny raharaha toy ny olona mandeha any amin'ny fivarotana malalaka mandritra ny ora fiasana. Tsy azo lazaina hoe heloka ny olona toy izany. Noho izany, tsy nanao fahadisoana ny hiQ. Mahaliana fa nanohy nanazava ny antony mahatonga ny fitondrany ho liana amin'ny tombontsoam-bahoaka ny mpitsara.
Amin'ny lafiny iray, nanaiky ny fitsarana fa eo amin'ny tombontsoam-bahoaka ny mamela ny angon-drakitra, ny famindrana ary ny fanadihadiana. Noho izany, dia fitsipika mampidi-doza ny famporisihana ny fampidinana ny sakana amin'ny fahalalàna malalaka.
Ny tokony hianaranao avy amin'ny fanapahan-kevitra
Na dia mety tsy misy antony tokony handraisanao ny angona azo avy amin'ny LinkedIn aza, dia tokony hianatra avy amin'ny didy. Tsara kokoa ny milalao azo antoka amin'ny famakiana sy fanajana ireo robots. txt ny tranonkala rehetra. Tadidio fa ny didim-pitsarana dia mbola voatondro vonjimaika. Afaka mamela an'i LinkedIn amin'ny farany izany.
Na dia tsy misy fiantraikany eo aminao mivantana aza ny didim-pitsarana, dia faly ny fitsarana ara-federaly manohana ny politikan'ny fitazonana ny tranokala misokatra ho an'ny daholobe. Noho izany, ny fampahalalam-baovao dia tokony ho hita sy ahitanao ireo izay afaka mikaroka sy mampiasa azy tsara.
Tena mahasoa amin'ny olon-drehetra ny angona anaty tranonkala, indrindra fa ny mpanadihady amin'ny fampahalalam-baovao, ny mpikaroka, ny mpahay siansa ary ny matihanina hafa. Amin'izany, ny fanapaha-kevitra dia fampandrosoana azo antoka Source .